डिभोर्सपछि श्रीमतिलाई अंश नदिन आफ्नो घर आफैंले जलाए – Eps Sathi
डिभोर्सपछि श्रीमतिलाई अंश नदिन आफ्नो घर आफैंले जलाए
November 7, 2021 196
डिभोर्सपछि श्रीमतीलाई अंश दिन नपरोस् भनेर ७५ वर्षका एक वृद्धले आफ्नो करोडौं मूल्यको घरमा आ’गो ल’गा’एका छन् । जल्नुअघि त्यो घरको मूल्य ५ लाख ५० हजार पाउण्ड अर्थात नेपाली ९ करोड रुपैयाँ थियो। ती व्यक्तिले घरमा आ’गो लगाएपछि दमकल विभागलाई फोन पनि गरेनन्।
यतिसम्म कि घरमा आयो लागेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले पनि नदेओस् भनेर ती व्यक्तिले बिमा शुल्क नै बुझाएका थिएनन्। बेलायतका यी व्यक्तिको यो पूरै षड्यन्त्रको खुलासा एक्सेटर क्राउन कोर्टमा सुनुवाइको क्रममा भयो। पु’लिस र दमकल विभागले अदा’ल’तलाई यो आगो आकस्मिक नभइ जानीजानी लगाइएको बताए।
जाँचकर्ताहरुले ७५ वर्षका जोन म्याक्केरीलाई आ’गो लगाएकोमा दो’षी बताउँदै उनी एक्सेटर नजिकै केनफोर्डमा रहेको आफ्नो घरको हुन लागेको लिलामीबाट असन्तुष्ट रहेको बताए । डेलीमेलका अनुसार यो घरमा जोन म्याक्करी र उनकी पत्नी हिलारी २० वर्षसम्म साथमा बसेका थिए । जोनले आगो लगाउनुभन्दा पहिले निकै म’दि’रा पि’ए’का थिए।
त्यसपछि उनले प्रोपेन ग्यासका सिलिण्डरलाई ब्लोटर्चबाट आ’गो ल’गाए । आ’गो ल’गा’एपछि उनी आरामले कुर्सीमा बसे र फेरि म’दि’रा पि’उ’नथा’ले । छिमेकीहरु जम्मा भएपछि उनले आफ्नो घर ज’लि’र’हे’को आफूले हेरिरहेको बताएका थिए। जाँचकर्ताहरुका अनुसार घरमा १७ जूनमा आ’गो ल’गा’इ’एको थियो जबकि त्यसको ३ दिनपछि यो घर ५ लाख ५० हजार पाउण्डमा बेचिँदै थियो ।
तर, आ’गो ला’गेप’छि यो घर यति खराब भयो कि यसको मूल्य घटेर ३ लाख २० हजार पाउण्डमा बेचियो। अ’दाल’तमा बताइएअनुसार आ’गो लगा’उनुभ’न्दा पहिले जोनले श्रीमतीलाई घरभित्रका सामान निकाल्न पनि दिएका थिएनन् । जोनले आफूमाथि लागेको आरोप स्वीकार गरेका छन् ।
Prevविदेशीले सबैभन्दा धेरै मन पराउने र मन नपराउने कोरियन खाना कुन रहेछ त? जानौं
Nextएउटै गगँटोले पायो ८ लाख येन मूल्य, के छ खास यसमा?
नेपालले दियो कोरोना खोपको आपतकालिन प्रयोग अनुमति
अण्डा खाएपछि भुलेर यि ४ चिज नखानुहाेस नत्र हुनसक्छ गम्भिर असर!
कामदार लैजान कोरिया सकारात्मक, मन्त्रालयको निर्णय कुर्दै विभाग
नोभेम्बर १ बाट कोरियन सरकारले नयाँ निय’म ला’गू गर्दै, कोरियामा बस्नेहरुले जान्नैपर्ने